Koorsooyinka Qaabdhismeedka BIM - Geofumadas
Koorsooyinka Qaababka BIM
#BIM - Naqshadeynta Birta ee Sare
Baro naqshad dhismeedka adoo adeegsanaya softiweer casri ah oo casri ah. Naqshad dhisme dhammaystiran, tiirar qaabdhismeedka looxyada, faahfaahinta Qorshooyinka Tirakoobka iyo naqshadeynta Macallinku wuxuu sharxayaa dhinacyada fasiraadda sawirrada qaabdhismeedka iyo sida loogu fulin karo qaab-qaabaynta saddex-geesoodka ah. Sida loo abuuro qaabab daabacan ayaa loo sharaxay oo si tartiib tartiib ah loo fahmay ...
#BIM - Koorsada Injineeriyada Dhismaha iyadoo la adeegsanayo Revit
Tilmaamaha aasaasiga ah si loo abuuro jilitaanno farsamo oo ka mid ah barnaamijkan falanqaynta cunno-qabadka weyn. Injineero aad u tiro badan ayaa adeegsada Solid Modelers oo leh habka cunsuriga ah si loo xaliyo dhibaatooyinka maalinlaha ah ee xaaladaha walaaca, cilladaha, kuleylka wareejinta, qulqulka dareeraha, electromagnetism, iyo kuwo kale. Koorsadani waxay soo bandhigaysaa aruurinta fasalo loogu talagalay ...
Falanqaynta iyo qaabeynta dhismayaasha u adkaysata dhulgariirka: iyadoo la adeegsanayo barnaamijka CSI ETABS Ujeedada koorsada ayaa ah in la siiyo kaqeybgaleha aaladaha aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan ee barnaamijka loogu talagalay qaabeynta, Naqshada qaab dhismeedka dhismaha waa la gaari doonaa, dhismaha sidoo kale waa la falanqeyn doonaa iyadoo kuxiran qorshooyinka faahfaahsan, adoo adeegsanaya ...
Fikradaha aasaasiga ah ee dhismayaasha la taaban karo, iyadoo la adeegsanayo ETABS Ujeeddada koorsada ayaa ah in la siiyo ka-qaybgalaha agabyada aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan ee barnaamijka loogu talagalay qaabeynta, kaliya maahan in Naqshad dhismeedka qaab dhismeedka dhismaha la gaari doono, laakiin dhismaha ayaa sidoo kale lagu falanqeyn doonaa shaqada faahfaahinta qorshooyinka, iyadoo la adeegsanayo ...
Falanqaynta iyo qaabeynta dhismayaasha - Heerka eber ilaa heer sare. Ujeedada koorsada ayaa ah in la siiyo kaqeybgaleha aaladaha aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan ee barnaamijka tusaalaha, kaliya ma ahan Naqshadeynta astaamaha qaab dhismeedka dhismaha, dhismaha ayaa sidoo kale lagu falanqeyn doonaa iyadoo lagu saleynayo qorshooyinka faahfaahsan, ...